Maxaa looga hadlay kulankii RW Rooble iyo Qurbajoogta? | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Maxaa looga hadlay kulankii RW Rooble iyo Qurbajoogta?
Maxaa looga hadlay kulankii RW Rooble iyo Qurbajoogta?
Xafiiska Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa war ka soo saaray shir sanadle ah oo uu Rooble uga qeyb galay aaladda internetka.
“Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa ka qeyb galay Shirweynaha Sanadlaha ah ee Golaha Qurbajoogta Soomaaliyeed ee GSD, kaas oo lagu soo bandhigay fursadaha horumarineed ee ka jira dalkeenna una baahan iskaashi iyo wadajir ah si looga faa’iideysto kaalinta Qurbajoogta Soomaaliyeed” ayaa lagu yiri warkan.
Ra’iisul wasaaraha ayaa la wadaagay qurbajoogta Soomaaliyeed horumarka maalgashi ee dalka laga sameeyay iyo kobaca dhaqaale, “isagoona tusaaleeyay fursaddaha shaqo loogu abuuri karo dhallinyarada Soomaaliyeed, kuwaas oo door firfircoon ku leh dib u dhiska dalka iyo dowladnimada.”
Qoraalka ayaa intaas ku daray, “Qurbajoogta Soomaaliyeed waxaa ay door weyn ka soo qaateen dib u heshiisiinta, Dowladnimada iyo horumarinta bulshadeenna ku nool gudaha, waxaa xusid mudan tan iyo burburkii dalkeenna in ay jiraan xarumo Caafimaad, Waxbarasho iyo Ganacsi ay ka hirgeliyeen dalkooda hooyo qurbajoogta, waxa ayna qeyb ka tahay dadaallada joogtatada ah ay ku bixiyaan soo kabashada dalkeenna.”
Maxaa looga hadlay kulankii RW Rooble iyo Qurbajoogta? was last modified: November 29th, 2020 by Admin
On International Day, UN Envoy Highlights Democracy’s Special Relevance in Somalia’s Transformation
Wasiirka Sadiq Warfa: Xal ayaa laga gaaray cabashada Shaqaalaha garoonka Aadan Cadde
Akhriso:-kenya oo raadinaysa in ay Golaha Amaanka ee Qaramada Midoobay soo farageliso muranka Badda ee kataagan
daawo sawiro- Kullan ay isugu imaadeen Gudiga qaban-qaabada Soo Dhaweynta madaxweynaha maamulka KGS
DHAGEYSO+AKHRISO:=WAZIIR KU XIGEEN KA MID AHAA GOLAHA CUSUB EE KGS OO IS CASILEY .
VIDEO waxaa maanta wazaarada dib u dajinta iyo jaaliyadaha KGS waxaa ay u koor gashey xaalada dadkaa ku dhiban xerooyinka
Suxufiyiinta oo sheegay in laga hor-istaagay tebinta doorashada Galmudug iyo weriye Coday oo la siidaayey
Dhageyso:-Wareysi Dad Barakacyal Ah oo Ka Tarsanaa Magaalada Bayadhabo oo Wadada Caruur kaga Dhimatay